तारानाथ उपाध्याय भण्डारी (जन्म: १९९१ असार ९, मृत्यु : २०७८ फाल्गुन ३ प्रख्यात नाम: तारानाथ शर्मा) झर्रोवादी आन्दोलनका अगुवा, नियात्रा विधाका संस्थापक, नेपाली निबन्धकार, कथाकार, उपन्यासकार, समालोचक र पाठ्यपुस्तक लेखक थिए। उनी नेपाली भाषा र साहित्यमा झर्रोवादीका रूपमा चिनिन्छन्। अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यावारिधि गरेका डा. तारानाथ शर्मा जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म प्राध्यापन पेशामा संलग्न थिए।।
(१९३४-०६-२३) जुन २३, १९३४ (उमेर ८७) १९९१ असार ९ । Death_date = ढाँचा:२०७८ फाल्गुन ०३
इलाम जिल्ला बरबोटे = नोभेम्बर ३, २०७८(२०७८-११-०३) (५६ वर्ष) -->
तारानाथ शर्मा १९९१ असार ९ गते प्रजापति उपाध्याय र देवकीको जेठो छोराका रूपमा इलाम, बरबोटेमा जन्मेका हुन्। तारानाथलाई बोधनारायण घिमिरेले धुलेपाटीमा अक्षर चिनाएका थिए। अक्षर चिनिसकेपछि उनले रुद्री, “चण्डी” र अलिअलि वेद पनि पढेका थिए। अनि संस्कृतको अमरकोश पनि अध्ययन गरेका थिए। साथै, उनले ज्योतिषको गणना गर्ने किताब भाषोति पनि सिकेका थिए। तारानाथ फिक्कलमा डेरा बसेर चन्द्र-मोहन मिडिल स्कुलमा एकैचोटि तीन कक्षादेखि अङ्ग्रेजी पढेका थिए।
पशुपतिनगरका राजबहादुर राईले अङ्ग्रेजी पढाउन काठमाडौँका चन्द्रभक्त कसजुलाई लगेका थिए। तारानाथले छ कक्षासम्म पहिलो हुँदै फिक्कलमा पढे। त्यसपछि दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफमा एकै चोटि नौ कक्षामा भर्ना भए र जिल्ला प्रथम हुँदै १२ कक्षासम्म पढे अनि थप पढाइका लागि बनारस गए। तारानाथको खास थर भण्डारी हो, तर बनारसमा पढ्न गएपछि नाममा शर्मा झुन्ड्याए। अङ्ग्रेजीमा छोटकरी नाम लेख्ने चलन विपरीत नेपाली नाम तारानाथलाई छोट्याएर ताना बनाए।
बनारसबाट बि ए गरिसकेपछि घर फर्केका बेला बुवाले हेडमास्टर खाली छ, यतै बस, अब पढाउन सक्दिनँ भनेर रोक्न खोजे तर उनी अनेक बहाना बनाएर ७० रूपैयाँ मागेर काठमाडौँ छिरे। उनले काठमाडौँमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिए, पाए पनि र पटना हानिए। उनी बेलायतमा पनि गएर 'दोस्रो भाषाका रूपमा अङ्ग्रेजी' (इङ्लिस एज अ सेकेन्ड ल्याङ्वेज) पढे। उनले अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट भाषाविज्ञानमा विद्यावारिधि गरे।
तारानाथ शर्माको पहिलो सिर्जना निबन्ध हो, २००८ सालमा थिओडर मेननको सम्पादनमा दार्जिलिङबाट निस्कने 'साथी' साप्ताहिक पत्रिकामा 'इलाम' शीर्षकमा छापिएको थियो। खर्साङ छँदा 'आह्वान' हस्तलिखित पत्रिका निकाले। 'हिमध्वनि' भन्ने पत्रिकाको सम्पादन गरे। उनको प्रकाशितमध्ये अन्तिम कृति 'चरी भरर' निबन्ध सङ्ग्रह हो। तारानाथ कविता पनि लेख्छन् तर थोरै। १४ मे १९५२ मा दार्जिलिङमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भेटेपछि कविता लेखनमा केन्द्रित नभएको उनले सुनाए। 'दार्जिलिङमा देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल र बालकृष्ण सम बर्सेनि आउँथे। स्कुलमा छलेर उनीहरूसँग भेट्न जाँदा देवकोटाले कविता नेलेख्नू, भित्रभित्रै पोल्छ, कविताले मलाई डढाइसक्यो भनेर मेरो डायरीमा लेखिदिए,' उनले सुनाए। देवकोटाले त्यतिबेला उनलाई इन्जिनियर हुन आग्रह गरेका थिए रे।
तारानाथ एकताका शर्माको सट्टा सर्मा लेख्थे। बनारसमा पढ्दा उनलाई आफ्नो थर 'भण्डारी' भारतीय जस्तो लागेछ र सर्मा लेख्न थालेछन्। थर फेरेर घर पुग्दा बुवाले गुनासो गरेछन्। 'एउटा पुस्तकमा 'इदं पुस्तकम् प्रजापति शर्मणः' लेखेको पत्ता लगाएपछि त्यसैको तर्कका आधारमा बुवालाई चुप बनाएँ,' उनले सुनाए। तारानाथ विद्यार्थी छँदै विभिन्न पत्रिकामा लेख तथा समालोचना छपाउँथे। उनको पहिलो पुस्तक 'नमस्ते' निबन्धसंग्रह रत्नपुस्तक भण्डारले २०१८ सालमा छापेको हो। दोस्रो कृतिका रूपमा २०२१ सालमा 'घोत्ल्याइहरू' भन्ने समालोचना सङ्ग्रह निस्क्यो। उनको सम्पादनमा गोपालप्रसाद रिमालको 'आमाको सपना' कविता सङ्ग्रह २०२० सालमा र गुरूप्रसाद मैनालीको 'नासो' कथा सङ्ग्रह २०२१ सालमा निस्केको थियो।
भानुभक्तदेखि तेस्रो आयासम्म-समालोचना सङ्ग्रह-वि.सं. २०२७
पश्चिमका केही महान साहित्यकार-समीक्षात्मक जीवनी सङ्ग्रह-वि.सं.२०२६
सम्पन ल्याएँ-समालोचना सङ्ग्रह-वि.सं. २०४४
श्री ५ बडामहारानी सरकार र सामाजिक सेवा-लेख सङ्ग्रह-वि.सं.२०४५
नमस्ते-निबन्ध सङ्ग्रह-वि.सं.२०४४ १०० जमर्काहरू-निबन्ध सङ्ग्रह-वि.सं.२०२५
श्रद्धाका सुमन-निबन्ध सङ्ग्रह-वि.सं.२०४४
जीवनका छाल-निबन्ध सङ्ग्रह-वि.सं.२०३०
दुइ पोका चुरा-कथा सङ्ग्रह-वि.सं.२०२६
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिसम्पादन
"नासो"-गुरूप्रसाद मैनालीको कथा सङ्ग्रह-सम्पादन-वि.सं.२०२१
आमाको सपना-गोपालप्रसाद रिमालको कविता सङ्ग्रह-संपादन-वि.सं. २०१९
पच्चीस वर्षो नेपाली निबन्ध-निबन्ध सङ्ग्रह-सम्पादन-वि.सं. २०३९
चाँदनी शाहका कविता-कविता-चाँदनी शाहको कविता सङ्ग्रह-वि.सं. २०३९
बल्दो दियो-कथा सङ्ग्रह-वि.सं. २०१३-संयुक्त सम्पादन
ऊ भएर मेरो अभिव्यक्ति-कविता सङ्ग्रह-सम्पादन-वि.सं. २०४४
पुरस्कार, मान-सम्मान, पदकसम्पादन
ठेगाना - निवास - सरस्वती टोल धोबीखोला, चाबेल, काठमाडौँ, ४७१९५
तारानाथको समालोचना खारिनुमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पनि हात छ। कोइरालासँग २०१६ सालतिर पटनाबाट अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेर आएपछि जागीरको दौडधुप गरेका बेला उनको निकटता बढेको थियो। पद्मकन्या क्याम्पसमा दुई पटक विज्ञापन खुल्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर पाखा लगाइएपछि धर्मराज थापाले उनलाई दोहोर्‍याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरसँग भेट गराइदिएका थिए। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट नियुक्तिपत्र लिएर पद्मकन्यामा पढाउन थाले। धर्मराजले पनि त्यतिबेलै रेडियो नेपालको जागीर पाए। 'त्यसपछि क्याम्पसको तलबले पुग्दैन भन्दै भाञ्जी शैलेजालगायत तीन जनालाई ट्युसन पढ्न बोलाएँ,' तारानाथले भने। क्याम्पसबाट मासिक तलब दुई सय ८० रूपैयाँ आउँथ्यो। पद्मकन्यामा जागीर थाल्नुअघि पनि उनी ट्युसन पढाउँथे। पुष्पलालले ट्युसन पढ्ने तीन जना खोजिदिएका थिए। ट्युसनबाट मासिक तीन सय रूपैयाँ आउँथ्यो। पद्मकन्याको जागीरे भएपछि उनले साँझ पाँचदेखि छसम्म ट्युसन पढाउँथे। 'त्यसपछि विश्वेश्वरसँग साहित्यिक गफ हुन्थ्यो। उतै आठ बजे खाना खाएर डेरा फकिन्थेँ। प्रायः उनका भाइ तारिणीले गाडीमा पुर्‍याइदिन्थे,' उनले सम्झे। विश्वेश्वरसँगको अर्को प्रसँग : 'एकदिन विश्वेश्वरले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको पुस्तक नेपालमा सबभन्दा पहिले कसले पढ्छ भनेर सोधे। मैले त 'तपाईँले' भनेर जवाफ दिएँ तर उनले 'होइन, सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पढ्छन्। सबभन्दा पहिले पुस्तक उनैकहाँ आउँछन्' भने। त्यसपछि उनले पढ्नका लागि आफ्नो समय नभएको जनाउँदै सूर्यप्रसादसँग भएका र अरू पुस्तक पनि पढेर सारमा सुनाउने जिम्मेवारी दिए।' त्यसपछि विश्वेश्वरले नै सूर्यप्रसादसँग चिनजान गराइदिएका थिए। त्यो चिनजानले विश्वसाहित्यमा उनलाई अद्यावधिक हुन मद्दत मिल्यो। पुस्तक पढ्ने र समीक्षा गर्ने क्रम बढायो। उनले आठ महिना विश्वेश्वरको संगत गरे।[स्रोत नखुलेको] २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि संगत टुट्यो।
२००७ सालको आन्दोलनमा तारानाथ शर्मा सक्रिय थिए। 'झापामा बिबी चेम्जोङ, नरेन्द्रनाथ बास्तोलाको अगुवाइमा भएको कांग्रेसको आन्दोलन सहपाठी पासाङ गोपर्मा, वीरेन्द्र खुजेलीसँग पछि लागेका थियौं,' उनले सुनाए। इलामबाट १६ युवा लिएर तारानाथ झापा झरेका थिए, बुधबारेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पहिलो पटक भाषण ठोके। उनीहरू कृष्णप्रसाद बास्तोलाको घरमा बसेर आन्दोलनका कार्यक्रममा सरिक हुन्थे। झापाका प्रशासकले आत्मसमपर्ण गरिसकेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता इलाम हानिएका थिए। 'पशुपतिनगर भन्सारमा कार्यरत बुवा बिरामी भएको सुनेर म त्यता गएँ। अरू मार्चपास गर्दै इलाम गए,' उनले भने, 'पशुपतिनगर पुग्दा त बुवा पनि कांग्रेस भइसकेको थाहा पाएँ। उहाँले युवाहरूलाई खटाएर मोटरबाटो खनाइरहनुभएको रहेछ।' बुवालाई भेटेपछि उनी आइतबारे खटिए। त्यहाँ उनको काम हुलाकमा आउने चिठीको सेन्सर गर्नु थियो। 'इलाममा बडाहाकिम थिएँ। उनीहरूको चिठी यतैबाट आउँथ्यो। राणाहरूको चिठी भेटिए च्यातेर फ्याँकिदिन मलाई अह्राइएको थियो,' उनले भने, 'व्यक्तिगत चिठी बढी हुन्थ्यो। राणालाई जाने चिठीमा 'तपाईँहरू उन्मुक्ति (विमोचन) चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त आत्मसमर्पण गर्नुस् भनेर पुछारमा आफ्नो नामसमेत लेखिदिन्थेँ।' केही दिनपछि बडाहाकिम विज्ञानशमशेर राणाले टुँडिखेलमा आत्मसमपर्ण गरे। 'हामी पनि गएका थियौं। टुँडिखेलमा विज्ञानशमशेरले नरेन्द्रनाथ बास्तोलासँग 'तारानाथजीलाई त देख्दिनँ नि!' भन्दै जिज्ञासा राखे। मलाई देखाउँदा उनी तीनछक परे। उनले तारानाथ ठूलै होला भन्ठानेका रहेछन्। त्यसपछि उनले मसँग हात मिलाए। त्यति ठूलो मान्छेसँग मैले पहिलोपटक हात मिलाएको हुँ।' बडाहाकिमले आत्मसमर्पण गरेपछि उनी पासाङ गोपर्मा र वीरेन्द्र खुजेलीसँग इलामको दरबार बस्न थालेका थिए। 'तर बुवाले अहिले राजनीति गर्ने बेला होइन, पढ्नुपर्छ भनेर राजाको छोराछोरी पढ्ने दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ पठाए,' उनले सुनाए।
↑ डा. तारानाथ शर्मा र शान्ताको ५० वर्षे प्रेमिल यात्रा
डा. तारानाथ शर्मा : घनघस्याको ओरालीतिर
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=तारानाथ_शर्मा&oldid=1065744" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १३ मे २०२२, ०२:१०
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०२:१०, १३ मे २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।